Laawuroon tapha cimaa torban kanaan Liiverpuul Arsenaaliin ni mo'ata jedhe - BBC News Afaan Oromoo
Laawuroon tapha cimaa torban kanaan Liiverpuul Arsenaaliin ni mo'ata jedhe
Madda suuraa, FABRICE COFFRINI
Kiloop fi Emiree
Arsenaal taphoota jalqabaa bara kanaan leenjisaa haaraa Unaay Emiree jalatti mo'amuun jalqabe. Harka Chelsii fi Liiverpuulitti jalqaba kan kufan yoo tahu booda taphattootni Arsenaal gara gahumsa gaariitti dhufan.
Arsenal walitti aansuun taphoota 11 mo'atee sanbata kana ammoo Liiverpuul keessumeessa.
Liiverpuul barana taphoota piriimerliigii gaggeesan hundaan hin mo'amne. Mos Saalaan gara galchii lakkofsisuutti deebi'uunsaa ammoo Kilooppiif gammachuu guddaadha.
Sadiyoo Maaneen bara kana taphattota Liiverpuul gahumsaa fi kaka'umsa gudaa agarsiisan keessaa tokko dha.
Haa tahu malee tapha kana irratti eenyutu gahumsa ol'aanaa agarsiisuu danda'a?
Xiinxalaan kubba miilaa Maarki Laawurensan, ''Arsenaal imala bareedaa irra jiraatanis, Liiverpuul garuu garee cimaafi isaan irra wayyudha,'' jedha.
''Arsenaal akkuma cimanii fuulduratti deemaa jiran, ani ammayyuu ittisa isaanii hin amanu,'' jedhe.
Maarki Laawurensan taphoota Piriimerliigii keessummota garaagaraa afeeruun torban torbaniin tilmaama.
Keessummoonni torban kanaa Maat Kiin fi Maat Nikolaas baandii muuziqaa Rook [rock] Bring Me The Horizon irraati.
Laawuroon tapha torban 11ffaa haala kanaan tilmaamera. Isinis yaada keessan nuuf qoodaa.
Samu'eel Eetoo waahila isaa jireenya daandiirraa baraare
Uzeyiin Boolt kilebii kubba miilaa Awustiraaliyaa gadhiise
Barnimaawuz v Man Yuunayitid
Barnimaawuz v Man Yuunayitid (8:30 PM)
Barnimaawuz amma ofitti amanamumaa gaarii irratti argamu. Humna isaanii guutuun taphachun akkuma torbee darbe Fuulhaam mo'atan gochuuf qophaa'u.
Maanchister Yuunaayitidis torbee darbe mo'atee jira gahumsi isaanii garuu dhaabbataa miti.
Ani Maanchister Yuunaayitid otumaa cimee taphachuu baate iyyu tapha kana ni mo'ata jedheen amana jedha Laawuroon.
Laawuroo : 0-2
BMTH's : 3-1
Kaardiff v Lechister siitii
Miirri taphattota Lechister Siitii waan akkamii irratti akka argamu beekuun baay'ee nama rakkisa.
Abbaan qabeenyaa kilebichaa Viichaay Sirivaddhanaprabha helikoopterri isaa tapha Westihaam waliin taasisaniin booda caccabuun isa waliin lubbuun namoota shanii darbeera.
Jaalalli taphattotni isaaf qaban ammoo olaanaadha. Taphattotni Lechister kabaja isaaf jecha mo'achuuf taphatu. Kaardiif morkataa cimaa tahus ani garuu Lechister Siitiin deeggara jedhe Laawuroon.
Laawuroo n: 0-2
BMTH's : 0-2
Arsenaal v Liiverpuul
Gareen lamaanuu yommuu kubba qabachuun gara fuulduraatti dhufan ni sodaachisu. Garuu Liiverpuul isa ji'oota 12 duraa caalaa sararri ittisaa isaa jabaataa taheera.Arsenaal ammoo ittisni isaa amansiisaa miti jedha Laawuroon.
Arsenaal taphoota 11 walitti aaansanii mo'aniiru. Haa tahu malee rga Chelsii fi Maanchister Siitii waliin jalqaba irratti taphatanii garee cimaa hin keessummeesine.
Kanaafuu Liiverpuul isaanitti cima, ta'us otuma mo'amani iyyuu leenjisaa isaanii haaraa jalatti jalqabbii gaariidha jedhe Laawuroon.
Laawuroo : 1-2
BMTH's : 3-2
Woolvis v Tootenaham
Woolvis torbee darbe Biraayitaniin mo'amuun isaanii na ajaa'ibeera. Garuu barumsa irraa argachuu danda'u jedheen amana. barana Maanchister Siitii irratti sochii cimaa agarsiisanii qabxii qooddatanii bahu danda'aniiru.
Tootenaaham torban darbe Man Siitiidhaan waan mo'ameef ceepha'ameera. Haa tahu malee amma taphattootni isaanii 11 tahan hundinuu qophiidha jedhen amana jedhe Laawuroon.
BMTH's : 1-2
Man Siitii v Saawuzhampitan
Saawuzhampitan galchii bitachuu hin danda'u. Bara kana taphoota muraasa irratti qofa galchii akkofsise.
Itihaad irratti qabxii qooddatanii bahuun isaanii haala ittisa isaanii irratti hundaa'a.
Taphattota Siitii ittisanii osoo galchiin irratti hin lakkaa'amiin bahu jedhees hin yaadu waan taheef Siitiin ni mo'ata jedhe Laawuroon.
BMTH's : 4-1
Chelsii v Kiristaal Paalaas
Kiristaal Paalaas taphoota 10 darban irraa galchiiwwan torba qofa argachuu danda'an. Torban darbes tapha Arsenaal waliin gaggeessan irratti rukuttaa peenaaliitii lama argachuun ture qabxii kan qooddatan.
Wilfired Zahaa irratti waan hundaa'aniif yoo inni waan addaa uume malee itti cimu danda'a.
Chelsiin Eden Haazaard maleeyyuu garee cimaa mo'achu danda'udha.
Leenjisaa Maarushiyoo Saariin garee dandeetti addaa qabu fudhate, mo'achuu tapha bareedaa agarsiisuu danda'u.
Dilbatas ittuma fufu jedheen abdadha jedhee tilmaame Laawuroon.
BMTH's : 3-0
Isinis tilmaama. Laawuroo waliin dorgomaa.
Saamu'eel Eetoon: Dursaa taphatootaa Kaameeruun daandiirra jiraachaa tureef waadaa gale
Taphata cimaa FIFA: Mohaammad Saalaan Baalon d'Oriif kaadhimame